Ahoana ny fomba hanovana ny fahitalavitra ho am-patana (horonan-tsary sy fampiharana) 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Tsy misy zavatra toy ny fampiononana mahafinaritra ny afo mirehitra, fa tsy ny rehetra no afaka mankafy azy io mora foana. Indrindra amin'ny tanàn-dehibe dia tsy fahita ny fatana ao an-trano, ary na ireo manana aza dia mety tsy manam-potoana na mety hanomanana kitay. Na ahoana na ahoana, azo atao izany alao tahaka ny fisian'ny fatana fandoroana ao an-trano ary mamorona tontolo virtoaly "virtoaly" izay tonga lafatra tsy ho an'ny fialan-tsasatra amin'ny alina ihany, fa mandritra ny sakafo hariva miaraka amin'ny namana na fianakaviana, toy ny amin'ny Krismasy na amin'ny ririnina hafa.
Azonao atao avadiho ho lasa fatana virtoaly ny fahitalavitra anao, maimaim-poana, amin'ny fomba tsotra sy mahomby maro, izay mitarika mankany jereo ny fitifirana afo mitifitra amin'ny famaritana avo, feno amin'ny feon-kitay mirehitra.
VAKIO IZAO: Ny sary ririnina tsara tarehy indrindra ho an'ny PC misy lanezy sy ranomandry
Mandeha ny Netflix aho
Ny fomba voalohany hanovana ny fahitalavitra anao ho am-patana, ary koa ny tsotra indrindra amin'ny rehetra dia ny filalaovana ny horonantsary misy fatana mirehitra. Izany dia azo atao amin'ny YouTube na, tsara kokoa, avy amin'ny Netflix. Mahagaga ny mijery Camino O an-trano ao amin'ny Netflix, afaka mahita horonantsary adiny iray tena vita tsara ianao.
Manokana, azonao atao ny manomboka ireto horonantsary manaraka ireto amin'ny Netflix:
Afon-trano ho an'ny tranonao
Afon-dabozia mahazatra ho an'ny trano
Kitapom-baravarana an-trano (Birch)
Mandeha ny Youtube-nao aho
Ao amin'ny YouTube dia afaka mahita ny zava-drehetra ianao ary tsy misy tsy fahampiana horonan-tsary lava hahitana fatana may sy mierona eo amin'ny fahitalavitra. Ny fantsona "Fireplace ho an'ny tranonao" dia misy kinova fohy kokoa an'ny horonantsary Netflix, raha mitady ny Camino na "Afo" ianao ao amin'ny YouTube dia afaka mahita horonantsary maharitra adiny 8 na mitohy izay afaka manomboka mivantana eto ianao:
Kitapom-batana tena izy 4K mandritra ny adiny 3
Afo mandritra ny 10 ora
Noely firafitry ny Noely 6 mineraly
Afo Noely 8 vy
VAKIO IZAO: Ahoana ny fomba hijerena horonantsary YouTube amin'ny fahitalavitra an-tranonao
Fampiharana hijerena fatana amin'ny Smart TV
Miankina amin'ny karazana Smart TV ampiasainao, azonao atao ny mametraka rindranasa maimaimpoana amin'ny fikarohana ny teny hoe Fireplace ao amin'ny App Store-ny. Anisan'ireo zavatra tsara indrindra hitako fa azontsika atao ny manondro:
Fampidinana am-patana ho an'ny iPad na Apple TV
Fitsipika voalohany am-patana
Fampiharana ho an'ny Android TV / Google TV Fireplace
Fandoroana virtoaly HD
Fampiharana Amazon Fire TV Fireplace
Afo hazo fotsy
Fandoroana virtoaly HD IAP
Fampiharana am-patana Chromecast
Fitaovana Chromecast (izay tsy Google TV), tsy manana rindranasa hijerena fatana fandoroana afo, ary nanjavona ihany koa ny safidy hametrahana takelaka famonoana afo miaraka amina afo (hita ao amin'ny Google Music izany). Na izany aza, azonao atao ny mitady ao amin'ny Store ny fampiharana izay afaka mandefa horonan-tsary misy afo mirehitra ao amin'ny Chromecast ho an'ny finday avo lenta Android (toy ny Fireplace for Chromecast TV) na ny iPhone (toy ny Fireplace for Chromecast). Azonao atao koa ny mandefa horonantsary Youtube amin'ny alàlan'ny finday avo lenta na solosainao ao amin'ny Chromecast.
Ahoana ny fomba hahalalana raha misy mpitsikilo amintsika amin'ny mikrô (PC sy smartphone)